Wadamada u ogolaanaya soo galitaanka suuriya bilaa fiiso - ALinks
Muwaadiniinta Siiriya waxay u safri karaan wadamada qaar ama territoriska fiiso la’aan ama fiiso kaliya markay yimaadaan.
Immisa wadan ayaad ku booqan kartaa baasaboorka Siiriya?
Waxaad ku booqan kartaa 30 dal ama territoria baasaboorka Siiriya adigoon dalban fiiso kahor.
Wadamadee reer Syria ay booqan karaan fiiso la’aan?
In badan oo Suuriyaan ah waxay ku nool yihiin kuna safraan Turkiga, Ciraaq, iyo Jordan laakiin si rasmi ah waxay ugu baahan yihiin fiiso ay ku galaan dalalkan.
Siiriyaanku uma baahna fiiso ay ugu safraan:
Andorra oo waad joogi kartaa 90 maalmood, laakiin waxaad u baahan tahay fiiso aad ku marto Faransiiska ama Isbaanish si aad ugu tagto Andorra;
Bermuda oo waxaad joogi kartaa ugu yaraan 21 maalmood;
Dominika oo waad joogi kartaa 21 maalmood;
Iiraan oo waxaad joogi kartaa 90 maalmood 180 maalmood gudahood;
Malaysia, oo waad joogi kartaa 90 maalmood;
Micronesia oo waad joogi kartaa 90 maalmood;
Samoa oo waad joogi kartaa 60 maalmood;
Sudan oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood.
Suuriyaanku waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan markay u safraan:
Cape Verde oo waxaad joogi kartaa 3 bilood;
Comoros oo waxaad joogi kartaa 45 maalmood;
Guinea-Bissau oo waxaad joogi kartaa 90 maalmood;
Macao (SAR Shiinaha) ;
Madagascar oo waxaad joogi kartaa 90 maalmood;
Maldives oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Mozambique oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Palau oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Rwanda oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Seychelles oo waxaad joogi kartaa 3 bilood;
Soomaaliya oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Timor Leste- oo waxaad joogi kartaa 30 maalmood;
Togo oo waxaad joogi kartaa 7 maalmood oo keliya;
Tuvalu oo waxaad joogi kartaa 1 bil;
Uganda oo waxaad joogi kartaa 3 bilood;
Yemen oo waxaad joogi kartaa 3 bilood.
Liiskan hoose waa liis xog-ogaal ah oo badan oo ka mid ah waddammada u oggolaanaya soo gelitaanka Suuriya fiiso la'aan. Markaad ku safreyso wadankan baasaboorka Suuriya uma baahnid fiiso ama waxaad heli kartaa fiiso markaad timaado.
Qof kasta oo wata baasaboor kasta wuu soo gali karaa Andorra wuxuuna joogi karaa 90 maalmood. Laakiin Andorra ma leh garoon diyaaradeed, sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad fiiso ku hesho Faransiiska ama Isbaanishka, fiisaha Schengen, si aad ugu tagto Andorra. Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan Websaydhada Arimaha Dibadda ee Dowlada Andorra. Waxay ku qoran tahay Catalan, Isbaanish, Faransiis, iyo Ingiriis, isticmaal Google Translate haddii aad u baahato.
Qof kasta oo wata baasaboor kasta wuu geli karaa Bermuda, ugu yaraan 21 maalmood. Waxa kale oo aad codsan kartaa kordhin dheeraad ah oo ah saddex bilood, taas oo sida caadiga ah ay fududahay in la helo. Baasaboorkaagu sidoo kale waa inuu shaqeynayaa 45 maalmood kadib maalinta aad qorsheyneyso inaad ka baxdo Bermuda.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah bogga internetka ee dowladda Bermuda. Kani waa af Ingiriisi, sidaa darteed isticmaal Google Translate haddii aad u baahato.
Muwaadiniinta Siiriya waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan 90 maalmood markay u safrayaan Cape Verde. Waxaad u baahan tahay inaad hesho diiwaangelin hore (EASE), oo la doorbido shan maalmood ka hor safarkaaga. waxaad ku sameyn kartaa barta DHAQAN bogga internetka waxaadna heli doontaa lambar codsi. Bilaa diiwaangelin hore (EASE) waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lacag dheeraad ah markaad timaado.
Waad joogi kartaa 90 maalmood muddo 180 maalmood gudahood ah. Uma baahnid fiiso haddii aad toos uga imaaneyso garoonka diyaaradaha Dimishiq. Akhri wax dheeraad ah Websaytka fiisada elektiroonigga ah ee Iiraan, oo ah Farsi, Jarmal, Ingiriis, iyo Carabi.
Visa markaad timaado
Ilaa 6 bilood.
Visa markaad timaado 90 maalmood, 30 maalmood lacag la’aan.
30 maalmood oo lagu kordhin karo.
Waad joogi kartaa 30 maalmood Malaysia la'aan fiiso. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Websaytka dawladda Malaysia.
Visa imaatinka 30 maalmood.
Waxaad heli kartaa fiiso markaad timaado. Waxaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha Bosaaso, garoonka diyaaradaha Gaalkacayo iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Visa imaatinka 45 maalmood.
Visa markaad timaado, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad hesho kahor bixitaanka.
Visa imaatinka 7 maalmood, kordhin ilaa 90 maalmood
Visa imaatinka 1 bil.
3 bilood fiiso markaad timaado eVisa waa la heli karaa
Maqaalkan, waxaan u adeegsaday ilo ahaan arrimaha dibedda ee waddan kasta sida kor ku xusan. Kahor intaadan bixin markasta ka hubso shirkaddaada duulimaadka waxa ku jira xaaladdooda si ay kuu oggolaadaan inaad raacdo duulimaadka.
Ururka Socdaalka Hawada Caalamiga ah (IATA) Xarunta Safarka sidoo kale waa ilo wanaagsan. Meelaha kale ee aan adeegsaday waa Tusmada Baasaboorka Hanley, Tusmada Baasaboorka, Fiisaha, Iyo CheckVisa.net.
Sawirka Daboolka waa daboolida baasaboor Siiriya laga qaaday Tusmada Baasaboorka.
Waxaa laga yaabaa 24, 2021
Sidee loo Dalbadaa Codsiga Fiisaha ee Chile?
Habka ugu fudud ee lagu dalban karo fiisaha Uganda !!
Fiisaha Ciraaq ee Hindida